Ururka Al-Shabaab oo Weerar ka fuliyay gudaha dalka Kenya | SAHAN ONLINE
Ururka Al-Shabaab oo Weerar ka fuliyay gudaha dalka Kenya
NAIROBI – Wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in maleeshiyo la tuhunsan yahay iney Al-Shabaab yihiin ay shalay gelinkii dambe ay weerar ku qaadeen shaqaale kamid ah kuwa qoda carra-kaawada ee guryaha lagu dhiso ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Dad Xogogaal ah oo deegaanka ah ayaa sheegay in uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Shimbir Faatumo oo ku yaalla Koonfurta Mandera.
Mid kamid ah mas’uuliyiinta gobolka ayaa VOA u sheegay in la aaminsan yahay uhu yaraan laba qof oo rayid ah iney ku dhinteen weerarkan illaa saddex kalrna ay ku dhaawacmeen.
Wargeyska Daily Nation ee Kenya kasoo baxa oo weerarkan wax ka qoray ayaa soo xigtay Madaxa amniga ee gobolka Kutswa Ololka oo isugu u sheegay in aysan weli caddayn tirada dadka waxyeelladu kasoo gaartay weerarkaas.
Wargaysku waxa uu sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa amniga ay ku baxeen goobta weerarku ka dhacay.
Gobolka Mandera waa ka ugu badan Waqooyi Bari ee Kenya ee ay ka dhacaan weerarrada Al-Shabaab ay ka geysteen Waqooyi Bari Kenya.
Al-Shabaab ayaa bishii May ee sanadkii hore weerar ka geystay duleedka magaalada Ceel-waaq dhinaca Kenya waxaa ku dhintay laba kamid ah shaqaalaha qoda carro-kaawada.
Bishii December ee sannadkii 2014-ka weerar ay Al-Shabab ku qadaday shaqaalaha qoda carrada waxaa ku dhintay 36 ka tirsan shaqaalahaasi taasi oo horseedday inay si xawli ah shaqaalaha aan Soomaalida ahayn uga qulqulaan gobolkaasi.